Nhwɛsoɔ:Infobox UNESCO World Heritage Site
Riga( pronounciation of "Riga" (help·info)) yε Latvia ahenkuro. Emu nnipa dodoɔ yɛ mpem ahansia ne du-nan, ahansia ne du-nwɔtwe (614,618).
Wɔkyekyeree Riga wɔ afe 1201 mu ɛna ɛsane nso yɛ Hanseatic League kuoba dadaa. Riga abakwasɛm mu nsɛm pii no ara wɔ UNESCO World Heritage Site, wɔdi akɔtene wɔ Art Nouveau/Jugendstil architecture dwumadie mu ɛne 19th century wooden architecture nso dwumadie mu yie.
Na Riga na ɔyɛ European Capital of Culture wɔ afe 2014 mu, ɔne kuro bi te sɛ Umeå a ɛwɔ Sweden. Riga mu na afe 2006 NATO Summit dwumadie no kɔɔ so, ɛna Eurovision Song Contest a ɛkɔɔ so wɔ afe 2003 mu nso, afei afe 2006 IIHF Men's World Ice Hockey Championships no nso ɛhɔ na ɛkɔɔ so, afe 2013 World Women's Curling Championship no nso kɔɔ so wɔ hɔ ɛna afei afe 2021 IIHF World Championship no nso kɔɔ so wɔ hɔ.
1 Beae a ɔnyaa edin Riga firii
3 Agokansiekuo ahodoɔ
4 Agoprama ahodoɔ
4.1 Agokansie dwumadie ahodoɔ
5 Beae a menyaa mmoa firiiɛ
Beae a ɔnyaa edin Riga firii[sesa]
Nimdefoɔ pii na akyerɛ wɔn adwene afa Riga asekyerɛ ne beaeɛ wɔnyaa din no. Riga yɛ asɛmfua yɛfɛm firii Linonian asɛmfua "ringa" asekyire ne kukuruwa a wɔde totoo tete Daugava asuo ho.
Riga yɛ kuro a dwadie di mu akotene. Riga yɛɛ Duna urbs ntɛm so(2nd centrury). Na ɔne Finic nnipakuo na ɛte.
Riga hyɛɛ aseɛ nyinii sɛ viking dwadie atenaeɛ. Riga mu nnipa, nsuo mu nam yie, mmoa yɛn ɛna dwadie na ɛyɛ wɔn adwuma, afei na ɔyɛ nnua adweneɛ, iron timber.
Livonian Chronicle a ɔwɔ Henry gyetum sɛ Riga yɛ kuro a dwadie kɔ so pa ara wɔ(12th century).
Germany dwadifoɔ tae kɔ ho ma ɔkɔ bɔɔ wɔn sese beaeɛ bi wɔ afe 1158, ɛny Germany nko ara na mmom Meinhardfoɔ a ɔfiri Segeberg. Meinhardfoɔ de Nyamesom kɔɔ hɔ ɛna Roman asafo ne nsɔrensɔre ahodoɔ no bi wɔ Latvia, mfeɛ pii maa wɔn dodoɔ no ara bɔɔ asu.
BK VEF Rīga –
Barons LMT –
TTT Riga –
Dinamo Riga –
HK Riga –
Riga FC –
FS Metta-LU –
JDFS Alberts –
Bɔɔbɔkuo ahodoɔ a aguguo
JFK Olimps –
Arena Riga –
Skonto Stadium –
Daugava Stadium –
Biķernieku Kompleksā Sporta Bāze –
Agokansie dwumadie ahodoɔ[sesa]
FIDE Grand Swiss Tournament 2021
Beae a menyaa mmoa firiiɛ[sesa]
↑ 5.0 5.1 https://en.wikipedia.org/wiki/Riga#cite_note-BilmanisLIS-24
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Riga&oldid=62331"
Nsesae ba kratafa yi so da 20 Ogyefuo 2022, mmere 12:50.